Warka Wanaagsan Wuu Faafay | Farriinta Kitaabka
Warka Wanaagsan Wuu Faafay
Wacdiga awgiis Bawlos dhul iyo badba safar buu ku maray
BAWLOS markuu diintiisii beddelay wuxuu ku dadaalay inuu naadiyo warka wanaagsan ee Boqortooyada Ilaahay. Haddaba waxaa dhacday in ninkan Kirishtaanka ka soo horjeedsan jiray qudhiisa si daran looga soo horjeedsado. Rasuulkan dadaalka badan dhowr jeer buu wacdi meelo aad u fog fog ugu safray siduu u faafiyo warka wanaagsan ee Boqortooyada. Boqortooyada fulin doonto Ilaahay ulajeeddadiisii hore uu binuʼaadanka ugu talaggalay.
Safarkiisa wacdiga u horreeyay oo magaalada Lustara Bawlos wuxuu bogsiiyay nin ilaa markuu dhashay curyaan ahaa. Dadkii arkay waxay ku dhawaaqeen inay Bawlos iyo Barnabas oo la socday ilaahyo ahaayeen. Labadan nin dadkii dhib bay kaga celiyeen inay allabariyo u sadaqeeyaan. Laakiin isla dadkan waxaa duufsaday cadowyadii Bawlos. Cabbaar kaddibna way dhagxiyeen Bawlos ilaa ay u maleeyeen inuu dhintay. Haddaba Bawlos wuu ka badbaaday dhagxintoodii. Waqti kaddibna wuu ku noqday magaaladaas siduu u xoogeeyo oo u waaniyo xerta meeshaas joogtay.
Yuhuudda Kirishtaanka ah qaar ka mid ah baa ku dooday in kuwa aan Yuhuudda ahayn ay xajiyaan qaybo ka mid ah Sharcigii Muuse. Bawlos arrintan wuxuu u geeyay rasuulladii iyo waayeelladii Yeruusaalem joogay. Markay si taxaddar leh u eegeen Qorniinka Quduuska ah oo tilmaanta ruuxa Ilaahay heleen warqad bay kiniisadaha u qoreen. Waxay ku waaniyeen inay ka fogaadaan sanam caabudidda, sinada, cunidda dhiig iyo hilibka dhiigga leh. Amarradan waxay ahaayeen ‘waxyaalo waajib ah’ laakiin ka ma dhignayn inay xajiyaan Sharcigii Muuse.—Falimaha Rasuullada 15:28, 29.
Safarkiisii wacdiga oo labaad Bawlos wuxuu booqday Beroya oo maanta ku taal Gariigga. Yuhuudda meeshaas deggan eraygiisa bay aqbaleen iyagoo xiiso weyn u qaba. Maalin kastay baadhi jireen Qorniinka Quduuska ah siday u hubsadaan tacliintiisa. Haddaba mar kale baa laga soo horjeedsaday oo wuxuu ku qasbanaa inuu Ateenay u safro. Halkan niman reer Ateenay ah oo cilmiyaqaan ah buu khudbad awood leh ka hor dhiibay. Khudbaddani waxay matashaa hadalyaqaannimo, taxaddar iyo caqli.
Safarkii wacdiga oo saddexaad dabadeed Bawlos Yeruusaalem buu aaday. Markuu macbudkii booqday Yuhuudda qaarkood baa buuq iyo rabsho kiciyay oo damcay inay dilaan. Askartii Rooma baa arrintii faraggalay oo Bawlos waraysi ku imtixaamay. Bawlos sharci buu Rooma ku lahaa sidaa darteed isdaafaciddiisa wuxuu hor keenay taliyihii Feelikos oo reer Rooma. Yuhuuddii waxyaalaha ay ku dacweeyeen way xaqiijin waayeen. Siduunan Yuhuudda ugu gacangelin Bawlos wuxuu ku yiri Feestos oo ahaa taliye kale oo Rooma: “Waxaan u ashtakoonayaa Kaysar.” Feestosna wuxuu ugu jawaabay: “Kaysar baad u tegaysaa.”—Falimaha Rasuullada 25:11, 12.
Bawlos doonni buu Talyaaniga ugu dhoofay sida maxkamad loo geeyo. Intay safrayeen doonnidii baa la jabtay oo xilligii qaboobaha jasiiradda Malta bay ku degeen. Aakhirkii markuu Rooma soo gaaray laba sano buu guri kiro ah ku noolaa oo askari waardiyeynayay. Laakiin rasuulkan dadaalka badan wuxuu Boqortooyada Ilaahay ku wacdin jiray qof walba oo soo booqdo.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Falimaha Rasuullada 11:22–28:31.
Maxaa dhacay markuu Bawlos bogsiiyay nin curyaan ah oo Lustara jooga?
Sidee baa loo xalliyay arrintii ku saabsanayd xajinta Sharcigii Muuse?
Muxuu Bawlos Rooma u joogay muxuuna meeshaas ka qabanayay?
Wadaag Wadaag Warka Wanaagsan Wuu Faafay